रत्नपार्कबाट मान्छे लेखेट्ने कि व्युंझाउने ? « Janata Samachar
रत्नपार्कबाट मान्छे लेखेट्ने कि व्युंझाउने ?
काठमाडौं । अत्यासलाग्दो ठाउँ ! संसार विचित्र लाग्ने, कहाँ पो आइपुगेछु भन्ने लाग्ने । घुम्दाघुम्दै समयले नेटो काटेको पत्तै भएन । जहाँ हेर्दा पनि उस्तै लाग्ने । न रातजस्तो न दिनजस्तो । सबै चिनेका जस्तै पनि लाग्ने । नाता पनि दाइ, आमा, बहिनी दिदी । पहिलो पटक काठमाडौं यात्रा र ढिलोसम्मको घुमाइ । अगाडि आएको दाई ! दुईचार कुरा थपेर दिइहाल्ने । यता यस्तो उता त्यस्तो । कता–कता उहाँको बोलीमा नै झुट मिसिएजस्तो । एक व्यक्ति मजस्तै नयाँ रहेछन्, सोधिहाले, ‘बानेश्वर जाने गाडी कता पाइन्छ ? अन्दाजमा दिएँ, ‘यताबाट राइट, त्यसपछि लेफ्ट, बानेश्वर जाने गाडी भेटिन्छ ।’
यस्तै यस्तैमा बित्यो दिन । झमक्कै राति भएछ । रातको ८ बज्यो । रुम जाने तयारीमा थिएँ तर दाइले एकछिन ‘अरु धेरै देखाउँछु’ भन्दै रोके । मनमा आनन्द लागिरहेको थियो । खासै थकान महसुस थिएन । विमानको यात्रा त्यो पनि ५० मिनेटको, के नै थकाइ लाग्थ्यो र ! मन पनि चंगा थियो । ज्यान पनि फुरुंग । पहिलो दिन भएर पनि होला हल्का आत्तिरहेको पनि थिएँ । सानोमा सुनेको राति–राति काठमाडौंमा हिँड्नु हुन्न रे, चोर डाँका लाग्छन्, अपहरण गर्छन् । तर, वास्तविकतामा त्यस्तो लागेन । खै ! किन हो सानोका सबै कुरा त्यो दिनले बिर्साइदिएको थियो ।
राति ९ बज्योः
समय ढल्कियो । रुम जान आत्तिएको थिएँ । दाइले रोके । झिलिमिली शहर राति झन आनन्ददायी । रात ढल्किँदै गयो, प्रहरी सुरक्षा तैनाथ हुँदै गएको आभास भयो । एकथरी मान्छेलाई प्रहरी लखेट्दै गएको दृष्य देखिन्छ । फेरि एकैछिनमा ती मान्छे त्यहीँ देखेँ । के भएछ ? मेरा लागि पक्कै नौलो अनुभव थियो । दाइको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै नजिक गयौँ । त्यहाँ पुगेपछि त अस्तव्यस्त शब्द कोलाहल सुनियो । जुन मेरा लागि अपाच्य थिए । कोही जाने भन्दै थिए, कोही कसैलाई टार्गेट गरेर कस्तो निरीह भन्दै जिस्क्याउँदै थिए । लाग्यो यो कस्तो काठमाडौं ? यहाँका मान्छे कस्ता, हाम्रो गाउँघरमा यी छाडा शब्द बोल्दा समाजको मुखमा बदनाम भइन्छ । मुख देखाउने बाटो रहँदैन । त्यो दिन त्यो रात यतिकैमा बित्यो । करिब साढे ९ बजे घर फर्कियौँ । मनमा अनेकथरी शब्द, भावनाले डेरा जमाइरह्यो ।
काठमाडौं आउने हरेकले एकपटक घुम्ने क्षेत्र हो रत्नपार्क । त्यहाँको स्थिति हेर्दा दिनप्रतिदिन मानव समाजको मानक खस्किँदै गएको पाइन्छ । पहिलोपटक काठमाडौं आएका मानिसलाई त झनै अत्यासलाग्दो दृष्य । त्यस क्षेत्रको व्यवस्थापन र पर्यटकीय आकर्षणको बिन्दु बनाउन जरुरी छ । केही झुण्ड आएर बाटोमा हिँड्ने मानिसलाई जिस्काएको, अपशब्द बोलेको सुन्दा सँगै हिँड्ने दिदीबहिनी आफन्तलाई नकारात्मक असर परेको छ ।
यसको समाधानका निम्ति काठमाडौं महानगरपालिकाको भूमिका के भन्दा पनि कसरी भन्नेमा देखिन आवश्यक छ । मान्छे लखेटेर होइन, समाज व्युंझाएर रत्नपार्कबाट विकृति हटाउन जरुरी छ ।